Maitiro ekutarisa iyo iPhone 12 chiitiko | IPhone nhau
Maitiro ekuona iyo iPhone 12 chiitiko
Kana isu tangove neiri pamutemo zuva uye nguva yekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone mamodheru, ayo zvinoenderana nerunyerekupe angave mana mamodheru, iwe unofanirwa kuona iyo sarudzo isu tinofanirwa kukwanisa kuteedzera mharidzo mhenyu.
Mupfungwa iyi, Apple inoita kuti zvive nyore uye chero munhu ane nguva yekuwanikwa panguva yechiitiko achakwanisa kuzviona. Iwe unongofanirwa kuwana iyo Apple webhusaiti muchikamu chezviitiko uye tinakirwe nezvavanoratidza, asi isu tinogona zvakare kutevera chiitiko ichi kubva kuYouTube kana kubva kuApple TV yedu.
Chero mudziyo unobvumidza kupinda muchiitiko, hazvidiwe kuve neiyo iPhone, iPad kana Mac yacho, saka chero munhu anoda kuona mharidzo yacho anogona nakidzwa nevhidhiyo iyo Apple yatigadzirira isu yeiyi yakamirirwa kwenguva refu. Rangarira kuti gore rino tichava nemamodeli maviri 6,1-inch angave ari iPhone 12 uye 12 Pro, 5,4-inch imwe ingazonzi iPhone 12 mini uye imwe 6,7-inch ichave iyo iPhone 12 Pro Max modhi.
Chiitiko paYouTube chakagadzirwazve kwatiri Chipiri, Gumiguru 13 na19: 00 p.m. saka isu tinongofanirwa kuisa chiyeuchidzo kana tichida kana kuwana chaiko Apple chiteshi panguva iyoyo.
Mhoro, mhanyisa Iri ndiro zita rekukoka kwegore rino uye iwe unogona zvakare kuona iyo 3D animation apo patinoiwana kubva kune yedu iPhone. Mune ino animation izvo zvatinoona izuva regungano nemapoinzi akati wandei ayo anoonekwa nemutoo webhizinesi kadhi pacharo rakatangwa. Vazhinji vanoongorora vanotaura nezve kuratidzwa kweiyo nyowani AirPods Studio uye nyowani HomePod mini, tichaona izvo Apple inotiratidza neChipiri chinotevera, Gumiguru 13.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 12 » Maitiro ekuona iyo iPhone 12 chiitiko
Makuhwa anonongedzera ku kuratidzwa kweiyo HomePod mini asi kwete iyo HomePod 2